अब मुटु रोगका लागि नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार हुने
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १८, २०७४
प्रकाशित समय: १७:०४:४२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले बनाउन लागेको नयाँ एनेक्स भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ । ३० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको मुटु रोग उपचारको उक्त सेन्टरमा हाइब्रिड अप्रेसन थिएटर सहितको हुने छ र विशिष्ठको समेत मुटु रोगको उपचार हुने छ ।
हाल एक सय बेड क्षमताको उक्त सेन्टरले ४० बेडको नयाँ भवन बनाउन लागेको हो । स्थापनाको ७ वर्षमै मुटु रोग उपचारमा उत्कृष्ट उपचार सेवाका कारण मनमोहनमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । साथै हाइब्रिड अप्रेसन थिएटर समेत बनाइने भएको छ ।
हाइब्रिड अप्रेसन थिएटर नयाँ सोच अनुसार निर्माण हुने र जसमा क्याथ प्रोसिड्युर र शल्य चिकित्सा एकैपटक गर्न सकिन्छ । जुन नेपालमै पहिलो हुनेछ । भौतिक संरचना निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट ३० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य उपचारमा गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा गुणस्तरीयता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
भीभीआइपीका लागि सुइट सहितको परिकल्पना गरेर भवन निर्माण गरिने छ । सामान्य मानिसदेखि अति विशिष्ठको समेत उपचार गर्ने योजना सहित नया भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
बाइट डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर नयाँ भवनमा केही प्रविधि र सुविधा थपेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार सेवा दिने लक्ष्य लिएको छ । ८ बर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको स्थापना भएको थियो । सेन्टरले एक बर्ष भित्रमा विरामीको १३ करोड बराबरको निशुल्क उपचार गरेको छ भने ६ करोड नाफा गरेको छ ।
विपि कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ विशेषज्ञको नयाँ टोली
केहो सेक्स कुलत ? यसबाट कसरी बच्ने
एउटै महिलाद्वारा वर्षमा तीन पटकसम्म गर्भपतन ,अधिकांश अविवाहित
के तपाई लाइ थाहा छ ? यी हुन भुटेको मकैका आश्चर्यजनक फाईदाहरु
रातो मासु खानुको ५ बेफाइदा
आइरन चक्की’ दिनुपर्ने गर्भवतीलाई ‘अल्वेण्डाजोल’